Follow Us! Home ဒုတိယအကြိမ် ပြုလုပ်သော Barcamp Mandalay 2012 ကို ရွှေဖြူပလာဇာတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပုံ
ပထမဆုံး အကြိမ်ပြုလုပ်သော Barcamp Mandalay 2011 တွင် တက်ရောက်သူအများ သိုက်သိုက်ဝိုင်းဝိုင်း ဆွေးနွေးစဉ်
တတိယအကြိမ်မြောက် Barcamp Mandalay ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ( စနေနေ့ ) မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ ( တနင်္ဂနွေ နေ့ ) အထိ ရွှေဖြူပလာဇာ(ဒုတိယထပ်)၊ ၃၂x၃၃ကြား၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ မန္တလေးမြို့ တွင် ခမ်းနားသိုက်မြောက်စွာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် Barcamp Mandalay အား စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်လိုသူများအားလုံးကို လှိုက်လှဲပျူငှာစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် ။
Organizers Barcamp Mandalay ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့သော MCPA & MCIA အပါအ၀င် အခြားသော Organizer များ Read More Volunteers Barcamp Mandalay ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ကူညီပေးခဲ့ကြသော Barcamp Volunteer များ
Read More Sponsors Barcamp Mandalay 2013 ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ထောက်ပံ့ပေးကြသော Sponsors များ
Speakers တတိယအကြိမ် Barcamp Mandalay 2013 တွင် ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးကြသော Speakers များ
"တတိယအကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်သော Barcamp Mandalay တွင် ယခင့် ယခင်က ပြုလုပ်သော ပွဲများနှင့် မတူညီသော Event များပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ယခုပင် တက်ရောက်ရန် online Register လုပ်လိုက်ပါ"
What is Barcamp? Barcamp ဆိုတာ ဘာလဲ မသိဘူးလား? တကယ်တော့ ဘားကမ့်ဆိုတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူ မြင်သာအောင်ပြောရရင် မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ၀ိုင်း နဲ့ တူပါတယ် ။
IT နဲ့ပတ်သတ်လို့ရယ်မှ မဟုတ်ပဲ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကို ဆွေးနွေးရန် ခေါင်းစဉ် ကြိုတင်စဉ်းစားလာသူတွေကော မစဉ်းစားလာသူတွေပါ ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးနုိုင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပါ ။
ဆွေးနွေးရာမှာလည်း ဟောပြောပွဲတွေနဲ့မတူပဲ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူနဲ့ ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးသူ တရင်းတနှီး ဆွေးနွေးနုိုင်တာမုို့ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာပါ အကျိုးရှိမယ့် နေရာတစ်ခုပါ ။
Barcamp Mandalay Mandalay အနေနဲ့ပြောရင်တော့ ၂၀၁၁ မှာ တစ်ကြိမ် ၂၀၁၂ မှာတစ်ကြိမ် ဘားကမ့်တွေကုို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပြီး ယခု တစ်ကြိမ်မှာလည်း အရင်နှစ်တွေကလိုပဲ ခမ်းနားသိုက်မြိုက်စွာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ်တွေထက် ပိုမိုထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်တွေပါ ပါဝင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ယခုပြုလုပ်မယ့် တတိယအကြိမ် Barcamp Mandalay 2013 မှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲမယ့် Barcamper များ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးမယ့် Speaker များအားလုံး Online Register လည်းလုပ်နုိုင်ပြီဖြစ်တယ် ။
Online Register လုပ်ထားတဲ့သူတွေကို ပိုမိုထူးခြားတဲ့လက်ဆောင်တွေပေးဦးမှာမုို့ Online Ticket တွေကို Print ထုတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် Mobile တွေမှာ ထည့်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ယူခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့နော်
© 2012 Barcamp Mandalay is proudly powered by WordPress Back to Top